Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Australia » Dhulka Caasimadda Australia wuxuu Galayaa Qufulka COVID oo Buuxda
Airlines • Airport • Wararka Australia • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Shopping • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Territory Capital Australia waxay gashay xiritaanka COVID oo buuxa
Xiritaanka, dadka deggan Canberra iyo agagaarkeeda ku hareereysan waxaa loo oggolaan doonaa oo kaliya inay ka baxaan guriga sababo muhiim ah oo ay ka mid yihiin shaqo muhiim ah, daryeel caafimaad, ballamaha tallaalka, dukaamaysiga raashinka iyo hal saac oo jimicsi ah maalintii.
Territory Capital Australia waxay duubtay kiiskeedii ugu horreeyay ee COVID-19 muddo ka badan hal sano.
Ninku wuxuu ku faafay bulshada dhexdeeda iyada oo aan la ogayn meesha uu ka yimid.
Dhulku wuxuu geli doonaa xiritaan toddobo maalmood laga bilaabo 5:00 galabnimo waqtiga maxalliga Khamiista.
Andrew Barr, oo ah wasiirka ugu weyn ee Magaalo-madaxda Australia (ACT), ayaa ku dhawaaqay in dhulku geli doono xiritaan kadib markii uu duubay kiiskiisii ​​ugu horreeyay ee COVID-19 muddo ka badan hal sano.
ACT ayaa sii xirnaan doonta muddo toddobo maalmood ah laga bilaabo 5:00 galabnimo waqtiga maxalliga Khamiista ka dib markii nin 20 jir ah uu tijaabiyey cudurka coronavirus.
The Australian Capital Territory Caafimaadka ayaa sheegay in ninku uu ku faafay bulshada dhexdeeda iyada oo aan la ogayn meesha uu ka yimid.
Kani waa kiiskii ugu horreeyay ee COVID-19 oo laga dhex arko bulshada ACT muddo ka badan 12 bilood.
Barr ayaa yidhi "Go'aankan xiritaanku waa natiijada kiis togan oo ka jira dhulka, kiis ayaa ku faafay bulshada dhexdeeda," ayuu yidhi Barr. "Hadda ma garanayno meesha uu cudurku ka yimid, laakiin baaritaan ballaaran ayaa socday saacado badan."
"Kani waa halista caafimaad ee ugu daran ee aan wajahayno dhulka sannadkan, runtii, tan iyo bilowgii masiibada," ayuu raaciyay.
Jesse Chang wuxuu leeyahay,
Ogosto 12, 2021 markay tahay 14:05
Magaalooyinka kale ee caalamka waa inay wax ka bartaan ACT!